Labo Haween oo mid is qarxin rabtay iyo mid raashinka sun ugu dari rabtay Ergooyinka shirka oo lagu qabtay Kismaayo – idalenews.com
Wararka ka imaanaya magaalada Kismaayo ayaa sheegaya in maanta magaalada lagu qabtay labo haween oo mid ka mid ah isku qarxin rabtay xarunta uu ka socday shirka maamul u sameynta Jubbaland iyo haweeney ka mid aheyd shaqaalaha raashinka u karinayay ergooyinka shirka ka qeyb galaya oo sun ugu dari rabtay.
Labada haween ayaa la sheegay in la dhigay xabsiga, kuwaasoo su’aalooyin la weydiinayo, waxaana arrintan aad looga hadal hayay magaalada, markii ay soo baxeen warka sheegaya in mid is qarxin rabtay midna ay damacsaneyd inay sun ugu darto raashinka.
Wararka ayaa inta ku daraya in ammaanka xarunta shirka ka socday ee Jaamacada Kismaayo aad loo adkeeyay, waxaana qaar ka mid ah Idaacadaha Muqdisho oo soo xiganayay saraakiisha ammaanka ay arrintan maanta baahiyeen.
Dhinaca kale Maamulka KMG ah ee Kismaayo ayaa awaamiir ka soo saaray ciidamada ku sugan magaalada inay ka baxaan oo ay aadaan duleedka magaalada, kadib markii saacadihii u dambeeyay ay soo kordheen dhibaatooyin ay geysteen askarta.
Taliyaha Amniga Kismaayo Maxamuud Qaalib ayaa sheegay in askarta ay ilaa 10-ruux siyaabo kala duwan ugu dhaawaceen magaalada, isla markaana ay dhac u geysteen, isagoo raali gelin ka bixiyay.
“Waxaa fareynaa askarta magaalada ku jirta inay 24-saac gudahood uga baxaan oo ay aadaan xeryahooda, ciidanka ammaanka oo la soo xulay ayaa shaqo ka qabanaya cidii ka madax adeegtay, cidii is hor taagtana wajiga ayaa xabad looga dhifanayaa”ayuu yiri Taliyaha Amniga Kismaayo.
Warkan dhiilada wata ee ka soo yeeray Taliyaha ayaa laga cabsi qabaa inuu magaalada isku dhac ka dhaliyo, iyadoo maalmihii u dambeeyay magaalada gaareen boqolaal askari oo ka tirsan milateriga Soomaaliya.
Magaalada Kismaayo ayaa waxaa ka socda shirweyne lagu dhisayo maamul la magac baxay Jubbaland, iyadoo shirkan uu hareeyay khilaaf siyaasadeed oo looga soo horjeeday qaabka shirka u socdo, kadib markii dowladda Soomaaliya ay qaadacday.
Al-Shabaab oo gabar dhalinyaro ku toogtay Fagaare ku yaal degmada Buulo Burde